नपुंसकता के हो ?
एजेन्सी । भनिन्छ, दम्पतीबीचको सम्बन्धमा उनीहरुको यौन जीवनको अहंम हिस्सा हुन्छ । स्वस्थ्य र सक्रिय यौन जीवनले दम्पतीको सम्बन्धलाई प्रगाढ, सुमधुर बनाउँछ । तर कतिपय यस्ता कमजोरी हुन्छन्, जसले यौन जीवनलाई खल्लो बनाउँछ । इरेक्टाइल डिसफङ्सन अर्थात नपुंसकता यस्तै समस्या हो । यस्तोमा पुरुषले यौन सम्बन्ध बनाउन असमर्थ हुन्छन् । सोझै भन्दा, त्यस्ता पुरुष शारीरिक सम्बन्ध बनाउनमा असक्षम हुन्छन् । यो यस्तो जटिल समस्या हो, जसले दम्पतीको सम्बन्धमा संकट पैदा गर्छ ।
१. धेरैले गुनासो समेत गर्छन्, आनो लिंग उत्तेजित नभएको भन्दै । नपुंसकताको लक्षण यहि हो कि, लिंग सिथिल हुन्छ । अर्थात यौन सम्बन्धका लागि लिंग उत्तेजित हुँदैन ।
बद्लिदो जीवनशैलको कारण ह्दय रोग आम समस्या भएको छ । यसले हाम्रो शारीरिक सम्बन्धलाई पनि खराब गर्छ । यसले इरेक्टाइल डिसफङ्सन आउन सक्छ ।
हाइपरलिपिडाइमिया एक बिमारी हो । यो रोग त्यहीबेला हुन्छ, जब आनो रगतमा अधि बोसो जम्छ । अर्थात कोलोस्टोर र ट्राइग्लिसराइड्स हुन्छ । यस बिमारीले पनि इरेक्टाइल डिसफङ्सन आउन सक्छ ।
तनावले यौन जीवनलाई सोझो प्रभाव पार्छ । अहिले हामी अनेकौ तनावबाट गुज्रिररहेका हुन्छौ । करियर, परिवार, स्वास्थ्य आदिलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने दायित्वले पनि तनाव पैदा भइरहेको हुन्छ । यसले हाम्रो यौन जीवनमा आसर गर्छ ।